न'ङ्गलाई सँधै स'फा, सुन्द'र र लामो ब'नाउन चा'हानुहुन्छ ? यसो गर्नुहोस् - HPsanchar.com
न’ङ्गलाई सँधै स’फा, सुन्द’र र लामो ब’नाउन चा’हानुहुन्छ ? यसो गर्नुहोस्
October 13, 2020 biplov adhikari जीवनशैली 0
अनुहार मात्रै सु’न्दर भएर हुदैन । शरीरका विभिन्न अ’ङ्गहरुपनि राम्रो हुनु पर्छ । जसमध्ये हातका नङ्ग पनि हो । प्राकृतिक रुपले स्वा’स्थ्य र सुन्दर नङ भए पनि अन्य विभिन्न कारणले गर्दा नङ बिग्रन सक्छ वा नङका विभिन्न समस्या देखा पर्न सक्छन् । साबुन, डिटर्जेन्ट, केमिकल आदिबाट नङमा रि’एक्सन हुनसक्छ । कडा पानीको प्रयोग गरी काम गर्दा नङ कमजो’र हुन्छ । भाँडा सफा गर्दा, लुगा धुँदा, सरसफाई गर्दा गरिने लापरवाहीले नङमा स’मस्या हुन सक्छ ।
– नङ पालिस लगाउनुअघि नङमा बदामको तेल लगाउनुहोस् । यसो गर्नाले नङ कडा हुँदैनन् । – नङको धब्बा हटाउन आलुको रस लाभप्रद हुन्छ । कागतीको रसले पनि धब्बा जान्छ । – नरिवलको तेलले नङ मालिस गर्दा नङ सुन्दर, चम्किला र कोमल बन्छन् । – एक चम्चा नरिवलको तेल तताएर त्यसमा एक चम्चा ह्यान्ड लोसन मिलाउनुहोस् । हप्तामा एक दिन यो मिश्रणमा २० मिनेटजति नङ डुबाउनुहोस् । चारपाँच पटक नियमित यसो गर्नाले कमजोर नङमा सुधार हुनेछ ।
– नङमा उसिनेको आलु रगड्नाले नङको चमक बढ्छ । – फिट्किरीको मालिसले नङलाई बलियो बनाउँछ । – नङ बांगा भए राति सुत्नुअघि तातोपानीले नङ धुने र नङमा बेसारको लेप लगाउने । बिहान नङ सफा गरेर जैतुनको तेलले मालिस गर्नाले नङहरू सीधा हुन्छन् । – नङ पालिस हटाउनका लागि घरेलु विधि प्रयोग गर्नुहोस् । कपासलाई एउटा डल्लोलाई मट्टीतेलमा भिजाउने र अर्को डल्लोलाई कागतीको रसमा । कागतीको रसमा डुबेको कपासको डल्लोलाई नङमा दल्नुहोस् र त्यसपछि मट्टीतेल भएको कपासको डल्लोलाई रगड्नुहोस् ।
य’सरी ब’नाउनुहोस् का’लो ओ’ठलाई गुला’बी र सुन्द’र ! गु’लाबी ओ’ठ सबैलाई मन पर्छ, तर अ’धिकांश महिलाहरु कालो ओठको स’मस्या झेलीरहेका छन् । जी’वनशैली, गलत खानपान, दैनिक लिपस्टिकको प्रयोग, धु’म्रपान र अन्य कारणले ओ’ठ कालो हुन्छ । कालो ओ’ठले सम्पूर्ण अनुहारको सौन्दर्यतालाई नै बिगार्छ । कालो ओ’ठलाई गुलाबी र नरम बनाउनका लागि ब्यु’टिशियनहरुले केही टिप्स दिएका छन् ।
ब्यु’टिशियनहरुका अ’नुसार तपाई टुथब्रसले दाँत जस्तै ओठ पनि सफा गर्न सक्नुहुन्छ । यसका लागि सफा टु’थब्रसले हलुका आफ्नो ओठलाई दैनिक सफा गर्नुहोस् । ओठको स्याहारका लागि तपाई ग्लिसरिन र नींबूलाई मिसाएर एउटा बोतलमा राख्न सक्नुहुन्छ । दैनिक त्यसलाई लगाउनुहोस् केही दिनमै तपाईको ओठको कालोपना जान्छ । चिनी र नींबूले ओठलाई मसाज गर्दा ओठ पुरानो रंगमा फर्कन्छ । नरम र गुलाबी ओठका लागि तपाई चुकन्दर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । यसले विस्तारै ओठको कालोपना हटाएर गुलाबी रंग बसाल्छ ।
पा’र्लर न’गइ अनुहा’र चम्काउने १० घ’रेलु उपा’य, यी मध्ये प्रयो’ग गर्नुहोस् कुनै ए’क ! अ’नुहार चम्काउन सौन्दर्य प्रशाधनमा मा’निसहरु हजारौं ख’र्च गर्छन्। व्यु’टी पार्लर धाउँछन् । तर कतिपय यस्ता सामाग्रीले कु’रुप बनाएका थुप्रै उदाहरण पनि छन् । मापदण्ड भन्दा बढी के’मिकल राखिएका सामाग्रीले रो’गको शिकार पनि बनाएका छन् । तर साइडइफेक्ट नहुने र घरमै सहजै पाइने तरिका प्रति भने सौन्दर्यका पारखीहरुको ध्यान गएको पाइदैन । केही यस्ता घरे’लु तरिका छन् जसले अनुहार चम्काउन मद्धत गर्छ । १० दुई चम्चा बेसनमा आधा चम्चा बेसार मिलाउने । त्यसलाई १० थोपा गुलाबजल र कागतीको रसले लेदो बनाउने । सो लेदोमा काचो दूध घोलेर पातलो लेप बनाउ’ने र अनुहारमा लगाउने । करीब २० मिनेटपछि अनुहार पखाल्ने । हप्तामा एकपटक यो तरिका अपनाउँदा अनुहारमा चमक आउँछ ।
२) डार्कसर्कल हटाउन आँखाको वरिपरी काँचो आलुको टुक्राले हल्का मसाज गर्ने । ३) एक चम्चा मह हातमा लिएर अनुहारमा लगाउने । ९ यसमा ४ र ५ थोपा कागतीको रस मिलाउन सकिन्छ । १५ मिनेटमा अनुहार पखाल्दा चमक आउँछ । ४) अनुहारमा चाया पनि आएको छ भने काक्रोको रसले मसाज गर्दा चाया कम हुन्छ । ५) निमको पातलाई पिसेर लेदो बनाएर लगाउदा छालाको रो’ग प्रतिरोध क्षमता बढाउँछ। यसले डन्डिफोर हटाउन पनि मद्धत गर्छ ।
६) पाकेको केरा मुछेर अनुहारमा लगाउँदा चाउरीपन हटाउँछ र छा’लालाई कसिलो बनाउँछ । ७) काँचो दूधले अनुहार मालिस गर्दा मरेको छाला हटाउँछ । ८) काक्रोको रसमा बेसार मिलाएर अनुहारमा लगाउँदा चमक आउँछ । ९) अनुहारमा घिउकुमारीको रसले मालिस गर्दा अनुहारमा चमक आउँछ र चाउरीपन पनि हराउँछ । १०) सुन्तलाको बोक्रलाई घाममा सुकाएर पिसेको धुलोमा कागतीको रस मिसाएर लेप बनाउने। यसलाई फेसवासको रुपमा प्रयोग गर्ने ।
का’खीमुनी ब’सेको कालो ध’ब्बालाई हटाउ’न चा’हानुहुन्छ ? यसरी ह’रेक दिन अ’पनाउनुहोस् यी घरे’लु उपा’य ! सेविंङ ,वा’क्सिङ र प’सिनाका कारण का’खी मुनिको भा’गमा कालो ध’ब्बा बन्ने गर्दछ र नराम्रो देखिन्छ । अण्डर आमको यो समस्या आम महिलाहरुको समस्या हो । अण्डर आमको यो समस्या केही घरेलु उपचारबाट पनि स’माधान गर्न सकिन्छ ।
१.हरेक दिन खानामा भिटामीन सि युक्त खानेकुराहरु जस्तै अम्बा,गोलभेडा,ब्रोकली,कीवी लिने गर्नुहोस । यसले छालाको दाग धब्बा र का’खी मुनीको कालो भाग हटाउन मद्दत गर्दछ । २.एलोवेराको प्रयोग गर्नाले छालाको हाइपर पिगमेन्टेसन कम हुदै जान्छ र छा’ला सफा हुदै जान्छ । यसको शितलताले नयाँ कोशिकाहरुको निमार्ण हुने गर्दछ । एलोवेराको जेल अण्डर आममा लगाउनाले छाला नरम हुने र कालो भएको दाग सफा हु’न्छ । ३.एक चम्चा बेकिंङ सोडामा गुलाब जल मिसाएर पेस्ट बनाउने । त्यसपछि कालो भएको भागमा हल्का मसाज गर्ने र पाँच मिनेटसम्म राख्ने त्यसपछि पछि हल्का मनतातो पानीले धुने । ४.काचो आलुको टुक्रा अण्टर आममा दश देखि पन्ध्र मिनेटसम्म दलिरहने । त्यसपछि एक घण्टासम्म त्यसलाई सुक्न दिने । अनि मनतातो पानीले धुदा अण्डरआममा हुने कालो दागबाट छुट्कारा पाउन सकिन्छ ।
हा’म्रा पु’र्खा प्रयोग गर्थे यी घरे’लु उपाय, जुन एकपटक ल’गाएपछि क’हिल्यै झर्दैन क’पाल ! यदि तपाईंको कपाल पनि धेरै झर्छ भने बजारमा कुनै पनि म’हँगो सामान किन्नु पर्दैन । हामी घरको उपचार गरेर आफ्नो क’पाललाई सुन्दर बनाउन सक्छौं र यो धेरै कालो र चमकदार हुनेछ । मेथी साँच्चिकै अद्धभुत मसला हो जसले हाम्रो खानालाई स्वादिष्ट बनाउँदछ, र यो धेरै प्रकारका मसलाहरूमा प्रयोग गरिन्छ, जुन कुनै चीज स्वादिष्ट बनाउनका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । मेथीको दा’नामा प्रोटीन, भिटामिन सी, फलाम, पोटाशियम र निकोटीन जस्ता पौष्टिक तत्त्व हुन्छन् जुन हाम्रो कपालका लागि अत्यन्त उपयोगी हुन्छ । मेथिको दाना कपालमा उपयोग गर्नु सर्वप्रथम मेथीलाई २ घण्टासम्म पानीमा भिजाएपछि भिजाएको मेथी र पानीलाई अलग अलग छानेर छुट्याउनुहोस् । अब यो पानीलाई उपयोग गर्नका लागी त्यस पानीलाई कपालमा लगाउनुहोस् । राम्रोको लागी मेथी पानीलाई रातिमा लगाएर सुत्नुहोस् र बिहान उठेर राम्रोसाग धुनुहोस् ।
मेथीको मास्क बनाउन, मे’थी पीसेर पाउडर बनाउँनुहोस् र नरिवलको दुधमा राम्रोसँग फेट्नुहोस् । त्यसपछि यसलाई आधा घण्टासम्म कपालमा लगाउनुहोस् र चिसो पानी प्रयोग गरी स्याम्पुले धुनुहोस् । क’पाल झर्ने समस्याको लागि, तपाईंले मेथीको दा’ना मज्जाले पिसेर पाउडरमा बनाउनुहोस् र यसमा नरिवल तेल वा जैतूनको तेल थप्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी तयार भएको पेस्टलाई जुन जुन ठाउँबाट धेरै कपाल झर्ने समस्या आइपरेको छ त्यस ठाउँमा यो पेस्ट लगाउनुहोस् र १० /१५ मिनेटसम्म छोड्दिनुहोस् र समय पुरा भइसकेपछि पानीले धुनुहोस् । तपाईहरुले यस्लाई जरुर ट्राइ गर्नुहोस् । यो तपाईको झर्ने कपालको लागी एकदमै फाइदाजनक छ । तपाईहरुले यसलाई एक महिना वा हप्तामा २ / ३ चोटी उपयोग गर्नसक्नुहुनेछ । यदि यसको प्रयोग राम्ररी गरेमा कपाललाई अति सुन्दर र कपाल झर्नबाट बचाउँछ ।
घा’मले डढेको छा’लालाई १ हप्तामै गो’रो बनाउन अपनाउ’नुहोस् यी उपा’य ! गर्मी मौसम छ । यो सँगै घाममा डढ्ने समस्या पनि आउँछ । घाममा डढनबाट बच्न वा डढिसकेको छालालाई जोगाउन निम्न उपाय अप्नाउन सकिन्छः १) छालालाई चिसो र शान्त बनाउन दिनमा दुई पटक चिसो पानीले नुहाउनुहोस् । यसले डढिसकेको छालाको दाग हटाउँछ । २) घा’मले डढेर छाला राता भएको वा फुटेको ठाँउमा काँचो आलुलाई पिसेर दल्नुहोस् र नुहाउनुहोस् । ३) जौको खोले हालेर नुहाँउदा पनि घामले डढेको दा’ग हट्छ । ४) घ्यु’कुमारीमा छालालाई शान्त र शितल प्रदान गर्ने तत्व हुन्छ । घ्युकुमारीको रस निकालेर केही समय फ्रिजमा राख्नुहोस् र छालामा लगाउनुहोस् । ५) चिसो दुधले शरिरलाई पखाल्दा पनि शरिर डढेको निको हुन्छ ।
६) काँक्रोलाई टुक्रा–टुक्रा पार्नुहोस् र त्यसलाई पिसेर तरल बनाउनुहोस् । यो रसलाई शरिरको प्रभावित क्षेत्रमा दल्नुहोस् घामले डढेको केही दिनमै हराउँछ । ७) कालो चियामा पनि एन्टि–अक्सिडियन्ट तत्व हुन्छ । घा’मबाट डढेको छालाको सौन्दर्यलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउन कालो चियाको केही थोपा लगाउनुहोस् । ८) पुदिना प्राकृतिक रुपमा नै शितलता प्रदान गर्ने चिज हो । तसर्थ दैनिक एक गिलास पुदिनाको जुस खाएर पनि घामबाट डढेको छालामा निखारता ल्याउन सकिन्छ । ९) कटनको क’पडालाई भिनेगरमा भिजाउनुहोस् र घामले डढेको भागमा लगाउनुहोस् । १०) उपचार गर्न भन्दा रोकथाम गर्नु उत्तम भने जस्तो घा’ममा जानुभन्दा अगाडि अनुहारमा लोसन लगाउनुहोस्। ११) चर्को घाममा जानुअघि घामबाट बच्ने ठूलो चस्मा लगाउनुहोस् । हामीले केहि सम्बन्धित थप जानकारी दिइएका छाै ।
सु’त्नु अघि मात्रै २ मिनट गर्नुहोस यी काम पा’उनुहुनेछ यस्तो च’मत्कार ! हामी अनुहारलाई लिएर निकै चिन्तित हुने गर्दछौ । सुन्दर, गोरो र चम्किलो अनुहार बनाउन सधै प्रयासरत पनि हुन्छौ । क्रिम पाउडर आदि लगाएर पनि अनुहार टल्काउने गर्दछौ। तर घरेलु उपाय भने हामीलाई थाहा नहुन सक्छ । अनुहार चम्काउन र सफा बनाउन सक्ने घरेलु उपाय धेरै छन
१.यदि चर्को घाममा तपाईंको छालाको रङ फिक्का या कालो भएको छ भने काँचो टमाटरलाई मिचेर मोही हालेर अनुहार र छालामा लगाउनुहोस्, छालालाई शीतलता प्रदान हुनेछ र कालोपना पनि हट्नेछ। २.नुहाउने पानीमा एक गिलास लस्सी हालेर नुहाउनाले पनि बिस्तारै बिस्तारै सनटेन हट्नेछ । ३.एक सानो चम्चा काँक्राको रस, आधा चम्चा ग्लिसरिन र एक चम्चा गुलाबजल मिलाएर घामले डढेको छालामा लगानाले छाला नरम र गोरो हुँदै जानेछ।
४.टमाटर र दही बराबर मात्रामा लिएर राम्ररी फिट्नुस् र यो मिश्रणलाई छालामा लगाएर १० मीनेटसम्म राख्नुस र चिसो पानीले धुनुहोस् । यो सनबर्नको लागि राम्रो टनिक हो। ५.काँचो दूधमा गुलाबजल हालेर कपासले छालामा लगाउनुहोस् । यसो गर्दा छालाको पुरै मैला कपासमा आउनेछ ।
६.चन्दन पिसेर त्यसमा गुलाबजलका केही थोपाहरू हालेर बनाइएको लेप अनुहारमा लगाउनाले छालालाई शीतलता पुग्छ । ७.कागती र मोही मिलाएर लगाउनाले घामका कारणले कालो भएको अनुहारमा निखार आउँछ । ८.एक चम्चा मख्खन र एक चम्चा पानी मिलाएर पिट्नुस, घाममा डढेको छालामा लगाउनुस् । यसले धेरै नै फाइदा गर्छ ।
९.दुई चम्चा काँक्राको रसमा एक चम्चा काँचो दूध हाल्नुस् र यसलाई कपासले अनुहार र गर्धनमा लगाउनुहोस् । यसबाट छालाको छिद्र खुल्छन् र धुलो तथा अतिरिक्त चिल्लोपना हट्छ अर्थात यसले क्लिन्जिङको काम गर्छ । १०.एउटा स्याउलाई पिसेर अनुहारमा लेप गर्नुहोस् । आधा घण्टापछि मनतातो पानीले अनुहार सफा गरेपछि छालाको चिल्लोपना काम भएर छालालाई कान्तिमय र नयाँ स्फुर्ती प्रदान भएको अनुभव हुनेछ।
११.छाला अति नै चिल्लो छर मेकअप रहँदैन भने बरफको टुक्रा दूधमा भिजाएर अनुहारमा दल्नुस् । यसबाट ताजगी र स्फुर्ती आउनेछ साथै चिल्लोपना रहनेछैन।१२.छालामा तुरुन्त स्फुर्ती ल्याउनका लागि कागतीको रस बराबर मात्रामा पानी हालेर त्यसलाई ट्रेमा जमाइदिनुस् । यो आइस क्युबलाई अनुहारमा दल्नुस्। चिल्लोपना नियन्त्रणमा आउँछ । १३.चिल्लो छाला भएका व्यक्तिहरूले कागतीको रस र त्यसको बोक्रालाई अनुहारमा दल्नाले फाइदा हुन्छ।१५.शीघ्र छालाको सफाइका लागि अंगुरको अर्धरस निकालेर बाँकी गुदी आफ्नो अनुहारमा रगड्नुस्। अंगुर अम्लीय हुन्छ, अतः रुखो र चिल्लो छालालाई समान रूपले पोषण र सफाइ गर्छ ।
खा’ली पेटमा म’ह मिसाएर दै’निक एक पोटी लसु’न खानुहो’स्, हुनेछन् यी १० फा’इदा